Semalt: अफलाईन उपयोगहरूको लागि वेबपृष्ठ बचत गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईंको काम सजिलो गर्न आश्चर्यजनक उपकरणहरू
वेबपेजमा टेक्स्ट, भिडियो, र छविहरूको रूपमा प्रस्तुत जानकारी समावेश हुन्छ, र उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभवको लागि प्राय: अन्य वेबसाईटहरूमा जोडिएको हुन्छ। यो पाठ-आधारित भाषाहरू जस्तै XHTML र HTML प्रयोग गरेर बनाइएको हो र बट्स र माकुराको सट्टा मानव अन्त्य प्रयोगकर्ताहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो। कहिलेकाँही हामीले वेबपृष्ठ अफलाइन प्रयोगको लागि बचत गर्नुपर्दछ, र साधारण उपकरणको साथ यसलाई सही रूपमा डाउनलोड गर्न सक्दैनौं। तलका उपकरणहरूले यद्यपि अफलाईन प्रयोगका लागि वेबपृष्ठ डाउनलोड गर्न वा बचत गर्न सजिलो बनाउँदछ।
साइटेक वेबकोपीको सब भन्दा विशिष्ट सुविधाहरूमध्ये यो एक हो कि यसले तपाईंलाई नयाँ वेब रेखाचित्रहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। यस उपकरणको साथ, विकासकर्ताहरू, प्रोग्रामरहरू, र स्वतन्त्रकर्ताहरू सजिलै आंशिक वा सम्पूर्ण साइटहरू उनीहरूको कम्प्युटर प्रणालीहरूमा बचत गर्न सक्दछन्। डाउनलोड गरिएको डाटाको कुल आकार तपाईको ब्राउजरको दायाँ कुनामा देखाइएको छ, र साइटेक वेबकोपीले तपाईका कार्यहरू केवल केहि क्लिकहरू पूरा गर्न मद्दत गर्दछ।
HTTrack ले तपाईंलाई अफलाइन प्रयोगहरूको लागि आंशिक वा सम्पूर्ण वेबसाइट डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ। यो एक प्रख्यात र भरपर्दो सेवा हो जससँग प्रयोगकर्ता-अनुकूल ईन्टरफेस छ। यो प्रयोग-गर्न-सजिलो छ, र तपाईंले यसको सेटिंग्स समायोजन गर्न र केही साधारण चरणहरू अनुसरण गर्न आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईं तिनीहरूबाट डाटा निकाल्न चाहनुहुन्न भने तपाईं केही लिंकहरू पनि बहिष्कार गर्न सक्नुहुन्छ। यो उपकरण प्रोग्रामरहरू, विकासकर्ताहरू, र वेबमास्टरहरूको लागि उपयुक्त छ र तिनीहरूलाई सजिलैसँग विभिन्न वेब कागजातहरू बचत गर्न मद्दत गर्दछ।
HTTrack जस्तै, getleft एक आधुनिक र व्यापक उपकरण हो अफलाईन उपयोगको लागि एक वेबसाइट बचत गर्न। यो सबै भन्दा राम्रो यसको उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस को लागी परिचित छ र विभिन्न अन्तर्क्रियात्मक सुविधाहरु र विकल्पहरु छन्। एकचोटि डाउनलोड र सक्रिय भएपछि तपाईले यसको सामग्री आफ्नो कम्प्युटरमा बचत गर्न यूआरएल प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। तपाई कि त वेब सामग्री गेटलफ्टको डाटाबेसमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ वा अफलाईन प्रयोगको लागि तुरून्त तपाईको हार्ड ड्राइभमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
One. OneNote र EverNote
तपाईको नोटबुक र मोबाइल उपकरणहरूमा वेब सामग्री बचत गर्नका लागि एभर्नट र वननोट दुई प्रभावशाली उपकरणहरू छन्। तिनीहरूले निर्दिष्ट वेब क्लिपरहरू वा विस्तारहरू प्रदान गर्दछ र तपाईंलाई अफलाईन प्रयोगको लागि सम्पूर्ण साइट बचत गर्न वा डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं वेब पृष्ठहरू वन फाँटको रूपमा OneNote र EverNote प्रयोग गरेर फाईलहरू बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
पेजनेस्टमा गेटलफ्ट र एचटट्र्याक जस्ता सुविधाहरू छन्। तपाईंले भर्खर वेबसाइट URL प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र यसको सामग्री आंशिक वा पूर्ण रूपमा डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। यो इन्टरनेटमा सबै भन्दा राम्रो र भरपर्दो उपकरणहरू मध्ये एक हो। PageNest को साथ, तपाईं आफ्नो समय र उर्जा बचत गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको हार्ड ड्राइवमा जति चाहानु भए साइटहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
अरू उपकरणहरू जस्तै, विकिपेडिया डम्पहरू अफलाईन प्रयोगहरूका लागि आंशिक वा सम्पूर्ण साइट डाउनलोड गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। विकिपेडियाले यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई यसको सामग्री डाउनलोड गर्न परम्परागत कार्यक्रमहरू प्रयोग गर्न भन्दैन। यसको सट्टामा, तिनीहरूले विकिपीडिया डम्पहरू प्रयोग गर्न सक्दछन् र XML र CSV ढाँचाहरूमा डाटा डाउनलोड गर्न सक्दछन्।